Bible Mu Nsɛm Farao Dae Ahorow - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
MFE abien twaam, ná Yosef da so da afiase. Nsahyɛfo no nkaee no. Afei da koro anadwo Farao soo adae soronko abien, na na ontumi nhu nea ɛkyerɛ. Wuhu sɛ ɔda hɔ? Ade kyee no Farao frɛɛ n’anyansafo na ɔkaa dae a ɔsoe no kyerɛɛ wɔn. Nanso wɔantumi ankyerɛ no dae no ase.
Afei nsahyɛfo no kaee Yosef. Ɔka kyerɛɛ Farao sɛ: ‘Bere a meda afiase no na ɔbarima bi wɔ hɔ a otumi kyerɛ dae ase.’ Farao ma wokoyii Yosef bae ntɛm ara.
Farao kaa ne dae no kyerɛɛ Yosef: ‘Mihuu anantwi akɛse ason a wɔadɔ fɛfɛ. Afei mihuu anantwi ason a wɔafomfɔn. Na wɔn a wɔafomfɔn no memmenee anantwi a wɔadɔ no.
‘Me dae a etia abien no mu no, mihuu awi mmɛtem ason a ayɛ fɛfɛɛfɛ wɔ nan koro so. Afei mihuu awi mmɛtem ntrantraa ason a ahow. Na awi mmɛtem ntrantraa no fii ase memmenee awi mmɛtem ason a ayɛ fɛfɛɛfɛ no.’
Yosef ka kyerɛɛ Farao sɛ: ‘Adae abien no kyerɛ ade koro. Anantwi ason a wɔadɔ ne awi mmɛtem ason a ayɛ fɛfɛɛfɛ no kyerɛ mfe ason, na anantwi ason a wɔafomfɔn ne awi mmɛtem ntrantraa ason no kyerɛ mfe ason foforo. Mfe ason bɛba a aduan bɛba pii wɔ Misraim. Na mfe ason nso bɛba a aduan remma koraa.’
Enti Yosef ka kyerɛɛ Farao sɛ: ‘Paw onyansafo na ɔnhwɛ mma wɔmmoaboa aduan ano nsie wɔ mfe ason a aduan pii bɛba no mu. Eyi bɛma nkurɔfo anya aduan wɔ mfe ason a aduan remma no mu.’
Farao ani gyee ho. Farao paw Yosef sɛ ɔnhwɛ mma wɔmmoaboa aduan ano nsie. Yosef bɛyɛɛ onipa titiriw a odi Farao akyi pɛɛ wɔ Misraim.
Mfe awotwe akyi, wɔ ɔkɔm bere no mu no, Yosef hui sɛ mmarima bi reba. Wunim nnipa ko a wɔyɛ? Wɔyɛ ne nuanom mpanyimfo 10 no! Wɔn agya Yakob asoma wɔn aba Misraim efisɛ wɔn aduan resa wɔ Kanaan. Yosef huu ne nuanom no, nanso wɔanhu no. Wunim nea enti? Efisɛ wayɛ panyin, na wahyɛ atade a ɛyɛ soronko.
Yosef kaee sɛ bere a ɔyɛ abofra no ɔsoo dae sɛ ne nuanom rekotow no. Wokae sɛ woakenken ho ade? Enti Yosef hui sɛ Onyankopɔn na ɔsomaa no baa Misraim esiane biribi pa nti. Dɛn na wususuw sɛ Yosef yɛe? Ma yɛnhwɛ.
Dɛn na ɛtoo Farao da koro anadwo bi?
Ɛyɛɛ dɛn na afei de nsahyɛfo no kaee Yosef?
Sɛ wohwɛ mfonini no a, adae abien bɛn na Farao soe?
Yosef kae sɛ adae no kyerɛ dɛn?
Ɛyɛɛ dɛn na Yosef bɛyɛɛ onipa titiriw a odi Farao akyi pɛɛ wɔ Misraim?
Adɛn nti na Yosef nuanom no kɔɔ Misraim, na adɛn nti na wɔanhu no?
Dae bɛn na Yosef kaee, na ɛboa no ma ɔtee dɛn ase?
Kenkan Genesis 41:1-57.
Ɔkwan bɛn so na Yosef de anuonyam maa Yehowa, na Kristofo bɛyɛ dɛn asuasua nea ɔyɛe no nnɛ? (Gen. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Pet. 2:12)
Ɔkwan bɛn so na aduan a ebuu so wɔ Misraim ne ɔkɔm mmere a edii hɔ no ma nsonsonoe a ɛwɔ honhom fam tebea a Yehowa nkurɔfo wom nnɛ no ne Kristoman de ntam no da adi? (Gen. 41:29, 30; Amos 8:11, 12)
Kenkan Genesis 42:1-8 ne 50:20.
Sɛ ɛyɛ amanne sɛ obi dibea nti wɔkotow no de kyerɛ obu ne nidi a, ɛyɛ bɔne ma Yehowa asomfo sɛ wɔbɛyɛ saa anaa? (Gen. 42:6)